LEGO ® Marvel Super Heroes Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
LEGO ® Marvel Super Heroes Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike
Site na Editor | Septemba 27, 2021
LEGO® Marvel ™ Super Heroes: Eluigwe na ala nọ n'ihe egwu nwere akụkọ mbụ na -agafe Universe Marvel niile. Were njikwa nke Iron Man, Ududo-Nwoke, Hulk, Captain America, Wolverine na ọtụtụ ndị ọzọ na-eju anya ka ha na-ejikọ aka ịkwụsị Loki na ọtụtụ ndị ọzọ na-eme ihe nkiri Marvel ịgbakọta nnukwu ngwa agha nwere ike ibibi ụwa.!
• gafere 91 mkpụrụedemede enwere ike ịtụgharị, dị ka Iron Man, Ududo-Nwoke, Captain America, Wolverine, na ihe ndị ọzọ nwere ike ịkpọghe ka ị na -aga n'ihu n'egwuregwu ahụ. Enwere ike ịnweta ezinụlọ agwa nwere ike ịnweta n'oge ọ bụla site na ịzụrụ site na ụlọ ahịa egwuregwu anyị.
• zuru ezu 45 ndị ọrụ juru eju ka ị na-achụsasị brik Cosmic n'ofe isi site na Eluigwe na Ala
• Na -alụ ọgụ megide ndị iro site n'iji oke ike dị ka ụgbọ elu, nnukwu ike na adịghị ahụ anya.
• Jiri mmegharị ọgụ ngwa ngwa wee rụọ ọrụ Super Moves dị ka Hulk's Thunder Clap na Iron Man's Arc Reactor..
• Mezue ihe ịma aka ma nweta ụgwọ ọrụ.
• Gbanwee n'etiti njikwa "Console" na "ihuenyo mmetụ" ka ịchọta ụdị egwuregwu ga-adịrị gị mma.
Egwuregwu a jupụtara n'ọtụtụ ọdịnaya na ihe nkiri sinima nke na -ewe nnukwu ohere! Ị ga -achọ 2.2gb ohere dị na ngwaọrụ gị ma ọ bụrụ na ị wụnye n'elu wifi, mana naanị 1.1gb ohere ma ọ bụrụ na ibudata na kọmputa gị wee mekọrịta.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ nrụnye ngwa, anyị na -adụ ọdụ ka ịmalitegharị ngwaọrụ gị mgbe ịwụnye ya n'ihi na nke a ga -edozi ụfọdụ nsogbu nkwụsi ike. Jide n'aka na ị rụnyela firmware kacha ọhụrụ.
Enweghị njikọ ịntanetị ọ bụla iji kpọọ egwuregwu a.
Ọ bụrụ na ị na -enwe ihe isi ike, biko kpọtụrụ anyị na support.wbgames.com.
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, Ndị dike, LEGO, Marvel, Super
← Simulator ihe owuwu 3 – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike DQ Dai: Ndị aghụghọ agbụ dike&Mbanye anataghị ikike →